Uncategorized – Blaogin'i gapti
Oktobra 31, 2018 Rafilandy	Leave a comment
Manahy aho fa… ny fisandratana 2030
Hampiakatra ny solika ho avo telo heny ny roa arivo Hampandeha an-tongotra ny mponin’Antananarivo
Ka ho miliara dera ireo mpandraharaha mpanera
Manahy aho fa… ny finiavana hahatafavoaka an’i Madagasikara Hamoaka indray ireo sisa kitay any ambanivohitray
Ka hosoloina fitaratra mijery masoandro
Ny fanamasahana ny kaly isan’andro
Manahy aho fa…. tsy misy ho sahy Hanao tsia… raha manaiky ny besinimaro
Hisafidy ny fahamarinana hialana amin’ny fahantrana
Fa aleo miray tsikombakomba miara mikolikoly amin’ny daholo be
Manahy aho fa… mandritra ny andro fampielezan-kevitra
Ho sodokan’ny androany sy ny eo no ho eo ihany ka ho simba Ny ampara-hatokin’ny Malagasy ka ny safidy ho tandrevaka Satria hifidy loko izay hita fa marevaka
Manahy aho fa… Izay filoha ho lany eo
Mbola hampanjaka risoriso izay mamotika ny ampitso
Ka… ho mbola, ho saribakolim-bazaha lalaovin-tanàna
Havia sy havanana.
Manahy aho fa… tsy handry fahalemana i Madagasikara Raha mbola be karama noho ny mpampianatra ny mpitandro ny filaminana
Ka mbola mihinana tsikelikely, mamelively, mandoto manoto amin’ny tandroka ireo valala kely vozona mitrongy voaozona. Manahy aho fa… raha mbola maro ny mitonantonana
Miandry vatsin’ankohonana vao homana
Dia mila miomankomana
Fa betsaka ny ho fatin’ny hanohanana mialoha ny mitatao vovonana
Manahy aho fa… ho ritra ny aingam-panahy
Satria mandeha mafy loatra ireo izay tia hivoatra
Ka mandrakotra ny maso sy ny sofina
Ka malaky mampadroatra ny ronono tsy notsofina
Manahy aho fa… ny teny Malagasy mety tsy hilamina
Raha mbola miteny teny indramina, raha mbola lany andro mitady izay hoanina
Ka tsy hanam-potoana hamoronana SLAM!
#Rafilandy be fiahiana 03/07/2018 – 14:22
Jiona 11, 2018 Rafilandy	Leave a comment
Ny famokarana Rakoto tsy hoe : miasa tany ihany dia mamboly avy eo
Fa mba jereo, ny asan’ireo Mpampianatra ireo
Tsy vitan’ny mahay fa mila mitady fomba fampitàna
Hahaizan’ireto zanakin’ny tanàna, ny abidia sy ny kajy
Kanefa anie jereo, tsy misy mpankasitraka, na izaho na ianareo!
Amiko, ireo Mpampianatra ireo no mpamokatra tena hikoizana
Tsy mitandro hasasarana, asa mendrika feno fahafoizana
Amiko, raha hampandroso firenena, ireo Mpampianatra jerena
Aza avela mahonena ho trotraka ambony ihany
Ireo no manala ny habadona mandrendrika ny tany.
Raha firenena ohatra antsika mbola marisarisa ny fanodinana akora
Manjaka ny ramatahora sy ny didiko fehy lehibe, toa tsy ho moramora…
Aleo mampita fahaizana, manitatra fahalalàna hahaizana manavaka ny ratsy sy ny tsara
Ny mpamokatra an’ireo, ny Mpampianatra ihany
Asa soa tsy manam-paharoa, mampianatra ny tsara, mampianatra ny soa.
Mampianatra an’i Kala, mampianatra an’i Zo…
O Rakoto ô! Mbola asa famokarana ihany koa
Ny manoratra, mandahatra ny teny tsy hanam-paharoa
Ho fanoitra hanova ny fisainana, hanatsara ny fiainana
Hanoroana ny hafa, ny lalana hizorana, ny tanjona hifotorana
Ireny asa famokarana amina haino aman-jery ireny
Dia niandoha avy amin’ny eritreritra sy nofinofy, ka lasa teny
Lasa sary, lasa tantara mamelona ny saina efa maharary…
O Rakoto ô! Izay rehetra atao ka manabe ny olona
Manampy azy hitolona sy hikononkonona
Ho henika fahavononana hiatrika fiainana
Dia efa famokarana, mampijoro ny hafa
Manatanjaka ny saina hitondra fivoarana…
Aprily 18, 2018 Aprily 24, 2018 Rafilandy	1 Comment
Ny tia tanindrazana amiko, manatsara ny ahy, ny manodidina ahy, ny tanànako. TSY MILA MILAHATRA AN-DALAMBE, tsy mila miseho haino aman-jery. Miasa mangina, manamboatra fiarahamonina, manatsara ny efa misy, mizara fahalalàna, mamokatra eny fa na dia ara-tsaina fotsiny aza, mitady fomba hampandrosoana ny manodidina.
Ry tanora, mandraisa andraikitra aza miandry tolorana, aza miandry ora sy andro fa atombohy. Ao amin’ny tenanao (hamafiso ny fahalalàna amin’ny alalan’ny vaky boky…), ao amin’ny fianakavianao (inona no afaka hiaraha-manao : asa-tanana madinika araka ny fanomezam-pahasoavana misy, fikambanam-pianakaviana…), ao amin’ny fiarahamonina misy anao (mpinamana mitambatra mampianatra ny zanakin’ny sahirana…) sy ny sisa. Tsy mila vola izany rehetra izany ary azonao atao amin’ny fotoana rehetra. Tsy mbola manana aton’asa ve ianao nefa manana fotoana ? Ny fotoana dia efa vola ho anao saingy tsy mivaingana izany. Azonao avadika ho fampitomboana ny fahaizana efa anananao ny fotoana. Mahaiza misafidy ny sori-dalàna tianao haleha. Manomboka amin’ny akaiky indrindra manantona tsikelikely ny lavitra tiana ho tratrarina.
Ny olona rehetra dia miasa daholo eny fa na dia ny Reny mikarakara tokan-trano aza fa saingy tsy sandaina fotsiny izy ary raha sandaina dia mitovy amin’ny vola hanakaramana ireny mpanampy an-trano ireny ny vola ampidiriny ao an-trano.
Misy fizaràna tsara iray ity homena ny rehetra. Jereo fa misy hifandraisany sy hifampiankinany ireto toko telo ireto : Ny ao an-trano, ny asa-tanana, ny fiompiana sy fambolena. Misy fitaovana tsotra ilain’ny ao an-trano tokony ho vitan’ny mpanao asa-tanana, ary ny akora ampiasain’ny mpanao asa-tanana tokony hovokarin’ny mpamboly.Ary misy asa-tanàna tokony ho jifain’ny isan-trano.
Tandremo, vidiana lafo ny fotoana (hiasana, hanaovan-javatra, hialana voly, hakana aina…). Jereo izay laharam-pahamehana sy manan-danja. Tsy ho fitadiavam-bola ihany fa misy asa atao tsy sandaina vola kanefa mahatsara ny fiainana.
Fa izany Ramose Lucien BOTOVASOA izany, efa zato taona taty aorina mbola tsy maty ary tsy lefy ny zavatra nataony. Tsy n’izaho izaho fa ny asany no nataony (nijoro mandrakariva tamin’ny fahamarinana, nanetry tena, nizara fahalalàna, nazoto nivavaka, nampiroborobo ny fikambanana masina nisy azy…). Mialohan’iny fanandratana azy ho olon-tsambatra tamin’ny faha dimy ambin’ny folon’ny volana aprily taona valo ambin’ny folo sy roa arivo iny dia maro ireo fahatsiarovana na fankalazana ny nahafatesany efa nataon’ny olona teo an-tanàna nisy azy. Koa herezo ary ry tanora namana isany, aleo mitolona ho amin’ny fanatsarana ny efa misy. Tsy mila mitady lavitra fa ny manodidina anao. Rafilandy 24/04/2018